Semalt: Google एनालिटिक्समा दारोदारको मतलब के हो?
स्प्यामले डाटालाई स्क्यू गर्दछ र बिगार्छ ता कि यसले तपाईंलाई उपभोक्ता व्यवहार र तपाईंको वेबसाइटको प्रदर्शनको बारेमा उपयोगी अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न सक्दैन। यो कम ट्राफिक प्राप्त गर्ने साइटहरूमा बढी प्रभावकारी हुन्छ (किनकि यदि डाटाले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्दछ भने) यो ठूला कम्पनीहरूको भन्दा हजारौं वा लाखौं दृश्यहरू प्राप्त गर्दछ।
गुगल एनालिटिक्समा स्प्याम प्राय: "पृष्ठ दृश्य" वा "रेफरलहरू" सेक्सनमा देखा पर्नेछ। तपाईं तिनीहरूलाई श susp्कास्पद URL हरू वा तिनीहरूको नामहरू मार्फत देख्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, Google एनालिटिक्स मा darodar को अर्थ के हो? नाम 'darodar' स्वचालित रूपमा तपाईको साइट स्पाम भएको सुझाव दिन्छ।
यस बर्षमा, "रेफरर स्पाम" को एक बढ्दो संख्या GA भित्र ट्र्याक गरिएको छ। पछिल्लो एक बर्षमा तपाइँको आगन्तुक डेटाको विश्लेषण गर्नुहोस् र वेबसाइटहरू भेट्नका लागि जाँच गर्नुहोस् get-Free-Traffic-Now.com, darodar free-share-बटन, र अन्य समान साइटहरू। तपाइँको वेबसाइट र लगभग सबै अन्य अनियमित चयन गरिएको साइट सम्भवतः यी बट्स तिनीहरूको विश्लेषकमा फेला पार्दछ। आर्टम अबगरियन, Semalt बाट विज्ञले Google डेटा विश्लेषणमा स्प्यामसँग कसरी व्यवहार गर्ने भनेर वर्णन गर्दछ तिनीहरूलाई तपाईंको डाटा बर्बाद गर्नबाट रोक्न।
GA मा स्पाम सामान्यतया दुई मुख्य तरिकामा आउँछन् - भूत रेफरलहरू र क्रलर रेफरलहरू
भूत स्प्यामले साइट भ्रमण नगरीकनै साइटको आगन्तुक डाटा फ्लाइट गर्दछ। उनीहरूले यो साइटको GA ट्र्याकिंग कोड कार्यान्वयन गरेर र GA सर्भरमा सिधा पठाएर। भूत रेफरकर्ताहरू द्वारा खडा गरिएको चुनौती भनेको उनीहरूको .htaccess फाइल प्रयोग गरेर ब्लक गर्न सकिदैन किनकि उनीहरू साइटमा शारीरिक पहुँच गर्दैनन्। भूत स्प्याम प्राय: गुगल एनालिटिक्सबाट फिल्टरिंग मार्फत हटाइन्छ।
क्रोलर रेफरल स्प्याम शारीरिक रूपमा तपाईंको साइट भ्रमण गर्दछ र तपाईंको वेबपृष्ठहरू क्रल गर्दछ। यस बोटको क्रलिंग गतिविधिहरूको कारण, तपाईंको GA रिपोर्टले देखाउँदछ कि तपाईंसँग तेस्रो पक्षीय डोमेनबाट उत्पन्न हुने आगन्तुकहरू थिए र तिनीहरूले तपाईंको साइटसँग अन्तर्क्रियामा राम्रो समय खर्च गरे।
क्रोलर स्पाम तपाइँको साइट समय समय समय मा भ्रमण गर्न सक्दछ। यो व्यवहारको नतिजाको रूपमा, तपाईले आफ्नो ट्राफिक डाटामा अव्यवस्थित शिखर र खण्डहरू देख्नुहुन्छ। यी बोटहरूले तपाईंको रोबोट.टीएसटी फाइलमा राखीएको नियमहरूलाई वेवास्ता गर्छन्। तर भूत स्प्याम विपरीत, तपाईं क्रॉलरहरूलाई तपाईंको साइटको .htaccess फाइलमा अवरुद्ध गरेर मेटाउन सक्नुहुनेछ जसले विशिष्ट डोमेनहरूबाट यातायात रोक्दछ र तिनीहरूलाई तपाईंको साइटमा पुग्न रोक्दछ। फिल्टरहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंको GA बाट बाहिर क्रोलर स्पाम प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यो तपाईं स्प्याम को रूपमा पहिचान गरीएको रेफरर स्रोतहरू बाहेक यो गरिन्छ।
स्प्याम पछाडिको विचार के हो र यसले तपाईंको साइटलाई कसरी असर गर्दछ?
यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि स्पाम कुनै पनि साइटमा पठाउन सकिन्छ किनकि सन्दर्भकर्ताहरूको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि वेब प्रयोगकर्तालाई क्लिक गर्नमा लोभ गर्नु हो। स्प्याम पछाडि यो सम्पूर्ण विचार हो त्यसैले चिन्ता नलिनुहोस् कि उनीहरूले तपाईंको डाटा वा केहि चोरी गर्न सक्दछन्। प्रायः रेफरकर्ताहरू उनीहरूको साइटहरूमा यातायात ड्राइभ गरे पछि मात्र हुन्। तिनीहरू व्यक्तिहरूको जिज्ञासामा बैंक छन्, यो जानेर कि तपाईं तपाईंको GA मा देखापर्ने कुरा जाँच गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। अब तपाईंलाई थाहा छ किन तपाईं कुनै GA रिपोर्टको "रेफरलहरू" र "पृष्ठदृश्यहरू" सेक्सनमा कुनै अज्ञात URL क्लिक गर्नु हुँदैन।
तपाईंको साइटमा स्प्यामको मुख्य प्रभाव तपाईंको डाटालाई स्किwing गर्नु वा गुगल एनालिटिक्सले प्रदान गर्ने जानकारीको शुद्धता बिगार्दै छ। क्रोलर स्पामले तपाइँको साइटको बाउन्स दरलाई प्रतिकूल असर पार्दछ किनकि बोट्समा जहिले पनि बाउन्स रेट १००% हुन्छ। यदि तपाईंको GA मा क्रलर स्प्याम छ भने, यसको निश्चित अर्थ तपाईंको बाउन्स रेट फुलाइएको छ।
त्यहाँ कुख्यात स्प्याम रेफररहरू छन् जसले दुर्भावनापूर्ण कोड पठाउँछन् जस्तो भाइरस। गुगल एनालिटिक्समा रेफरर स्प्यामको URL हरू क्लिक गर्नबाट रोक्न यो अर्को कारण हो।
तपाईको GA बाट रेफरर स्पाम राख्नको लागि फिल्टरहरू सेट गर्न र सबै अरू गरे पनि, त्यहाँ नयाँ संदिग्ध डोमेनहरू छन् कि छैनन् भनेर नियमित रूपमा तपाइँको लगत पुन: भ्रमण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। जब तपाईं त्यस्ता फेला पार्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई तपाईंको फिल्टरमा थप्नुहोस् र तपाईंको साइटको GA रिपोर्टहरू अधिक सटीक र उपयोगी हुनेछन्।